Carlo Ancelotti oo ka hadlay wararka sheegaya in Hazard uu ka tagayo Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 19 Jan 2022. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay wararka saxaafada ee ku saabsan suurtogalnimada uu Eden Hazard ka tagi karo inta lagu jiro suuqa jiilaalka.
Dhowr ilo wareed ayaa sheegay in Eden Hazard uu go’aansaday inuu ka tago Real Madrid bishaan Janaayo sababa la xiriira inuusan helin fursad ku filan, Ilo wareedyo kale ayaa sidoo kale tilmaamay in kooxda Los Blancos aysan dhib ku qabin bixitaanka ciyaaryahanka reer Belgiam.
Macalinka reer Talyaani ee Carlo Ancelotti ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta oo Arbaco ah wuxuu kaga hadlay, wararka sheegaya in Hazard uu baxao, wuxuuna yiri:
“Bixitaankii Hazard? Hadda, weli waa ciyaaryahan Real Madrid ah, wuu tababaranayaa oo diiradda saarayaa, mana jiraan wax kale ee aan ku fikireyno.”
Tababaraha reer Talyaani ayaa sidoo kale ka hadlay sababta daqiiqadaha kooban ee uu u siiyay weeraryahanka reer Belgium xilli ciyaareedkan, isagoo xusay inay la xiriirto dhanka farsamada iyo tartanka weyn ee ka jira gudaha kooxda.
“Waxba kama dhicin Hazard, kaliya tartan ayaa ka jira kooxda, waana inaan doortaa midka ugu fiican kulan kasta, tani waxay saameyneysaa ciyaartoy badan, mana diidi karo.”
“Waxba ma dhicin, wuxuu qaadanayaa tababarka, wuxuuna sugayaa go’aanka tababaraha, waxaan filayaa inuu diyaar noqon doono marka aan u baahanahay.”